Semalt: SEO Nhungamiro
Sezvatinoziva, nzira inoshanda kwazvo yekushambadzira ndeyekusimudzira zvinhu nemasevhisi kuburikidza neInternet. Nhasi, hazvigoneke kuwana kambani isina webhusaiti yekutengesa, sezvo ichi chiri chikuru chinodiwa chebhizinesi. Asi kuva newebhusaiti hakuvimbisi budiriro pasina kusimudzirwa kwayo. Kusimudzirwa kwewebsite ibasa rakaoma, iro rinogona kuzadzikiswa chete nenyanzvi SEO kambani. Usambovimba newebhusaiti yako kunevakuru vasingakwanisi kunyange kugadzirisa avo matambudziko. SEO optimization sewe webhusaiti webhusaiti yekushambadzira ine kodzero yeSemalt. Muchokwadi, Semalt haisi chete SEO optimization asiwo chiyero chakarongeka chekupedzisira kupfumisa.
Vane ruzivo varidzi vesaiti vanoshandisa kuyedza kushanda newebhusaiti yavo pachavo kana kuvimba nevanotengesa mumunda uyu. Nekuda kweizvozvo, bhizinesi ravo raparara. Uye mune yega yega mamiriro ezvinhu, vanhu vakateterera Semalt kuchengetedza mawebhusaiti avo, hatina kuramba. Isu takanyatso dhonza masosi avo kunze kweinonamira uye tavasundidzira kunzvimbo dzekumusoro injini yekutsvaga. Iwe zvirinani uverenge zviitiko izvi pawebsite yedu, kusanganisira mhinduro dzakanaka kubva kuzviuru zvevatengi. Semalt ine ruzivo rwakakura uye yepamusoro pehunyanzvi uye inogona kurarama nebasa chero rakaoma kunzwisisa. Iwe unogona kubudirira ne SEO optimization, asi chete kana iwe uchizviita naSemalt.
Pasina iyo yekucheka-kumucheto SEO tekinoroji, haugone kuzadzisa izvo zvauri kuda mhedzisiro. Nekudaro, budiriro haingoenderana nekushandiswa kweimwe mhando yehunyanzvi. Izvo zvakakosha kuti uenderane nenguva uye kugadzirisa zvirongwa zvekushandisa. Semalt inogara ichigadzira nzira nyowani dzekusimudzira mawebhusaiti, kushandisa hunyanzvi hwekugadzira zvinhu. Iyo kambani yakazvimisa semutungamiriri wekusimudzira kweSEO uye hofori yepasi rose mundima yekuvandudza webhu.
Chikwata cheSemalt chine vashandi vepasi rese-nyanzvi mune zvesehunyanzvi. Nyanzvi yega yega inokwanisa kutaura mitauro yakati wandei uye ine ruzivo rwakawanda mu SEO optimization. Aya ndiwo mamaneja ane ruzivo, nyanzvi dzeSEO, nyanzvi dzeIT, uye boka revanyori vane tarenda. Kunze kwezvo, vakugadziri vekumusoro-soro vanoshandawo muchikwata. Asati asarudza mhinduro ine hungwaru, nyanzvi dzinofunga nezvezvinhu zvese zvinokonzeresa kushambadzira kwewebsite. Yese saiti ipurojekiti nyowani inoda nzira yeumwe neumwe uye optimization nzira.
SEO-kukwidziridzwa kwenzvimbo muinjini dzekutsvaga kwakakodzera kune mazhinji mabhizinesi anopa zvigadzirwa zvavo kana masevhisi kuburikidza neInternet. Iyi nzira inoshanda yekutora midzi mune yekutsvaga kwenguva yakareba uye nekuenderera mberi kuwedzera nhamba yevashanyi. Yekutsva Injini Yekutsvaga (SEO), mumashoko akareruka, ndeyeti yakagadziriswa yemukati uye yekunze yekuita zviitiko zvakagadzirirwa kugadzirisa webhusaiti nzvimbo mune yekutsvaga injini. Nekudaro, webhusaiti inogona kuve yakarongedzwa zvakanaka neinjini dzekutsvaga, inofanirwa kushanda mukati nenzira yakaoma.
Kuve newebhusaiti hakuite mushe musimudzira. Pasina optimization, iyo traffic traffic ichave yakanyanya kuderera kana zero kana isingashandisi dzimwe nzira dzekukwezva traffic. SEO yakakodzera chero munhu arikuenda kunotengesa zvigadzirwa pamusoro peInternet, kutsvaga vatengi, vadyidzani, nezvimwe. Algorithms rankings irikuvandudza, matsva analytics masevhisi ari kubuda pamwe chete nekutsvaga kweaitwa mabasa zviitiko kunoitika. Semalt anoita mupiro mukuru mukuvandudza iyo SEO optimization system.
SEO kusimudzirwa kwewebsite mune injini dzekutsvaga kunosanganisira nharaunda nhatu dzakakosha: ekunze, mukati mekunze, uye kuongorora kwekuongorora. Imwe neimwe mirayiridzo ine zviito zvakasiyana zvinoda kuitwa mune zvakatevedzana. Kutenda kumakore gumi ezviitiko mukuvandudza kwewebhu webhusaiti, Semalt inopa mhinduro dzakaoma senge AutoSEO, FullSEO, uye iyo yakasarudzika yewebsite yekuongororwa kwewebsite. Kumhanya iyi macampaign kunovimbisa kukwira nekukurumidza kune zvinzvimbo zvepamusoro mune yekutsvaga injini. Nyatsoongorora chimwe nechimwe chazvo.
Vazhinji varidzi vewebsite vane chivimbo chakazara chekuti AutoSEO ndiyo mhinduro kwayo yekutamisa webhusaiti kunzvimbo dzekumusoro mune yekutsvaga injini. Haisi tsaona, sezvo huwandu hwevashandisi vakakwanisa kubudirira kuburikidza ino shasha yakawedzera nekukurumidza nekukurumidza. AutoSEO inosanganisira matanho akati wandei ekumanikidzira ayo anoitwa mukudyidzana nguva dzose neSemalt nyanzvi. Iyo nyanzvi dzekambani inotorawo mutoro weiyo yakabudirira mhedzisiro. Mukuita, iyo webhusaiti inogadziriswa ichashandurwa zvinoenderana nekushandisa zvinodiwa. Kukurudzira mune yekutsvaga injini pasina mubvunzo kuchabudirira. Heano mabasa makuru akagadzirirwa AutoSEO:
kusarudza akakosha akakosha;
kugadzira zvinongedzo kumawebhusaiti ane hukama;
AutoSEO mushandirapamwe unotanga nekukurumidza kana iwe uchinge wanyoresa pane yedu webhusaiti. Iyo yekuongorora webhusaiti inotanga kuenda, uye munguva pfupi iwe unogamuchira yekutanga ripoti pamusoro pezita renzvimbo yako mune yekutsvaga injini. Kazhinji kazhinji, panogona kuve nekukanganisa pane iyo webhusaiti mamiriro, saka SEO yedu injiniya inonyatsoongorora zvese zvikamu zvewebsite. Kamwe zvikanganiso zvikaonekwa, iwe unowana rondedzero, uye iyo SEO mainjiniya ichaadzima. Iwe hauna kana chikamu mubato, asi gara uchigara uchifunga nezvese zviri kuitika. Mushure mekuti zvese zvikanganiso zvinogadziriswa, iwo akakodzera mazwi achasarudzwa. Iyi chikamu inonyanya kuve nekuvandudza webhusaiti webhusaiti.
Nhanho inotevera ichave kusarudzwa kwewebhu internet. Aya ma-link anoitirwa kuwedzera kuisirwa mune zvekushandisa online. Nekuti injini yekutsvaga inoramba zvisina basa zvemukati, zvakakosha kuti ichengeteke ichida uye iine chinangwa. Semalt nyanzvi dzebasa 'basa ndeyekusarudza zvakakodzera zviwanikwa kuti uise zvinongedzo. Maneja wekambani anozvionera ega zviito zveunyanzvi, saka hapana chinokuvadza kune webhusaiti yako chingaitike chiitika. Yako webhusaiti yakachengeteka zvakakwana.
Iye zvino tinoda kuita shanduko dzinodiwa pawebsite. Iyo Semalt maneja anoita senge wekunze chipangamazano uye anoita mazano ezvekugadziriswa kwehunyanzvi. Mumwe mushumo unoratidza kuti ndedzipi shanduko dzinofanirwa kuitwa kuti uwane huturu hwekushandisa. Iyo nyanzvi dzinoshandisa FTP (File Transfer Protocol) kupinda. FTP kuwanikwa kunodiwa kuti uite nekukurumidza mhinduro kune yekutsvagisa injini yekutsvaga kuti ugadzirise zvinodiwa. Sezvo chinzvimbo chinogara chichiwedzeredzwa, Semalt inokuzivisa iwe nezvayo uye kusuma iwo mazwi makuru. Iwo mazwi makuru anofanirwa kuenderana nezviri mukati, zvinodzorwa nehunyanzvi zvakare. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuongorora uye kunyora mhedzisiro yakanaka. Mutengo wepamwedzi wekumhanya AutoSEO $ 99.
Mashandiro eFSSEO anoshanda
Semalt inopa iyo FullSEO yekushambadzira, iyo inovimbisa kusimudzirwa kwakabudirira kwewebsite munguva pfupi. Mushandirapamwe unosanganisira wekunze uye wemukati wepamusoro webhusaiti Maitiro ese ane zvikamu zvinoverengeka zvekumanikidza. Pakupera kwematanho ese ari maviri, chiyero chichava chakawandisa. Kufanana nechero imwe nhandare yeSemalt, iyo FullSEO inoitwa ichitariswa nemaneja, zviito zvese zvinoitwa nenyanzvi. Munguva pfupi iri kutevera, iwe uchaona kuti webhusaiti yako iri kusvika kune yepamusoro yepamusoro yekutsvaga nzvimbo zvinzvimbo nekukurumidza. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vakwikwidzi vako havachakwanise kubata nechinzvimbo chewebsite yako.
Kuti utange chirongwa ichi, iwe unofanirwa kunyoresa pane yedu webhusaiti. Ukangosaina, webhusaiti yako inotanga kuongororwa zvoga. Zvese zviito zvinoitwa padanho rino zvinoratidza hunhu hwemukati. Inosanganisira zviitiko zvinoverengeka pakuongorora chimiro chewebsite. Iwe uchagamuchira mushumo pamwe nemhedzisiro yekuongorora uye runyorwa rwezvikanganiso zvinowanikwa mune saiti mamiriro. Kukanganisa kwese kuchagadziriswa nenyanzvi yeSEO, saka haufanirwe kuita chero chinhu. Tevere, iyo SEO nyanzvi yakagadzika pane iyo data kubva pamushumo inotsanangura iyo semantic core. Mune optimization yemukati, iwo mazwi akakosha akasarudzwa ane chekuita nenyaya yako uye kugovera kwavo pakati pemapeji emunhu kwakanyanya kukosha. Izvo chete akakosha mazwi anokwanisa kuwedzera webhusaiti traffic. Kupinda muFTP kunobatsira nyanzvi kuita shanduko dzinodiwa pane webhusaiti.
Inotevera iko kwekunze optimization. Zvinoreva kushanda pane backlinks uye kuzadza niche zviwanikwa navo. Isu tinofanirwa kunzwisisa izvo zvinongedzo zvinoshanda zvakanyanya kune injini dzekutsvaga. Iri ibasa revanyanzvi. Ivo vanonyatsotarisisa izvo zvirimo. Inofanira kunyatsoenderana nezvinorehwa nezviwanikwa izvo zvinongedzo zvinopinda mazviri. Iyi poindi inogona kutariswa seinonyanya kukosha.
Semalt inoshanda nemasaiti akawanda akavimbika, saka hakuzove nematambudziko panguva ino. Nyanzvi idzi dzichasarudza zviwanikwa zvine hwakakodzera zvemukati zvinoenderana nezvinodiwa neSEO. Kana iwe uchinge wapinda zvinongedzo kune ayo mawebhusaiti, unogona kutarisira kusimudzira kwakabudirira. Mishumo yenguva nenguva inoita kuti uzive nezve shanduko iri pawebhusaiti uye nekukura kwemaitiro. Iwe unobatanidzwa mukuratidzira iwe semucherechedzi, asi uwane chero ruzivo. Nyanzvi dzinogara dzichibata newe nguva dzese.
Kana iwe ukamanikidzwa kumisa SEO kusimudzirwa, hazvizo kukonzera dambudziko rakawanda. Kunyangwe Google ichibvisa backlinks kubva mudura renhoroondo mukati memwedzi, masitepisi haazowere pasi zvakanyanya. Nzvimbo yezvigaro icharamba iri pane imwe nhanho, nekuda kweiyo FullSEO mushandirapamwe. Chikamu ichocho chichava chakanyanya kukwirisa kupfuura zvazvaive pamberi pekuratidzira. Iwo mutengo weFSESEO zvinoenderana nezvinhu zvakawanda, zvakanyanya zvine chekuita nemamiriro ewebhusaiti yako. Mutengo wekupedzisira uchagadzwa mushure meyekuongororwa kwewebsite neyeSEO nyanzvi uye nemhedzisiro yake. Mari yacho haifanire kukutyisidzira iwe zvakanyanya nekuti mari inowanzogara yakakwira kupfuura izvo zvinodhura muSemalt.
Mukutarisana neshanduko huru dzinoitika mukati meinjini dzekutsvaga, zvakanyanya kuoma kurwisa nemhando yekubatanidza. Izvo zvakatoomesesa kuziva iwo akakosha mapoinzi nekushayisa iyo munhu anogona kuona mhando yekufambira mberi kwesimba. Maitiro echinyakare akarasa kukosha kwavo, uye nzira itsva dzekusimudzira dzichiramba dzisina chokwadi. Pasina chinangwa chekuongorora, zvinenge zvisingaite kuzadzisa zvauri kuda zvekusimudzira. Imhaka yeichi chikonzero kuti Semalt akagadzira iyo yakasarudzika system analytics yakanangwa nekuona zvikanganiso zvehunyanzvi hwe webhusaiti nekuzvigadzirisa. Mabasa akakosha eAuttics nde:
Analytics inoona zvikanganiso zvinoita pakugadziriswa kwemasaiti uye nekukurumidza inosaina izvi. Asi hazvisi izvo chete chinangwa. Iyo system inonyatsotarisa zvirimo mune webhusaiti uye technical parameter. Inoongorora mawebhusaiti evanokwikwidza, kuongorora kugona kwavo kwemakwikwi. Kuti utange kuunganidza ongororo, unofanirwa kunyoresa pawebsite yedu. Mishumo inotevera inoratidza chinzvimbo chewebsite yako muye yekutsvagisa injini uye chinzvimbo cheavo vanokwikwidza. Kushandisa ruzivo rwunowanikwa kubva kumishumo, nyanzvi dzedu dzinoita shanduko dzinodiwa vachifunga nezve SEO-zviyero.
Kuve neakavimbika account kunokupa zvakanakira. Iwe unogona kuwedzera chero nhamba yewechitatu-bato webhusaiti kune yako pachako kabati. Iwo mawebhusaiti awakawedzera anotanga kuongororwa pachako paunenge uchiwana mushumo nedata rakadzama. Injini dzekutsvaga dzinogara dzichivandudza algorithms yavo, saka chete ndivo vanoongorora vanogona kukona kuita webhusaiti chaiyo. Iko kuongororwa kwakadzama kunoita kuti zvikwanise kuziva akakodzera mazwi. Pasina Analytics, hazvibviri kusarudza akakodzera mazwi anofanidza izvo zviri webhusaiti. Nekufarira, hongu, iwe unogona kuwedzera mazwi akasiyana kana kudzima zvisina basa. Iyo poindi ndeyekuti, iyo yekutanga seti yemashoko akakosha anodiwa yatove yapinda. Maitiro aya anokanganisa zvine simba kukurumidza kukura kwetraffic.
Ongororo data inounganidzwa kutenderedza wachi. Kupindira kwako kugamuchira mishumo yekushanda uye kugadzirisa mhedzisiro yakanaka. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti zviito zvacho zvakarurama kuburikidza neyekutsvaisa injini. Mhedzisiro yacho inokatyamadza: iwe unonyatsoona iyo yepamusoro nzvimbo yeyako webhusaiti. Uyezve, vakwikwidzi vako havachakwanise kukukunzurudza muinjini yekutsvaga. Isu tinokurudzira kushandisa Chikumbiro Chemukati Chirongwa, icho chinosenderedza data rese zvoga. Nekusaita basa, iwe unoramba uchifambidzana neazvino zvigadziriso. Iyo Analytics sevhisi inosanganisira matatu makuru mapakeji ane mutengo wakasiyana:
PROFESSIONAL - $ 99 pamwedzi (1 000 kiyi, mapurojekiti gumi, 1 gore renzvimbo nhoroondo);
Semalt inopawo mhinduro yakakwana yekuvandudza webhu. Nyanzvi dzedu dzirikugadzira webhusaiti yekutengeserana inoenderana neinongedzo yevateereri vavariro uye zvinangwa zvepurojekiti, kukudziridza dhizaini yakasarudzika, kushanda kwechirongwa. Isu tinobatanidza zvigadzirwa zvewebsite neyechitatu-bato mashandisirwo uye Kamisheni Management System, gadzirisa e-commerce modules uye APIs.
Yakasimudzira Vhidhiyo Kugadzirwa
Chero bhizimusi rinotarisira kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi kune vateereri vanonangwa. Musika wakakura zvekuti zviri nyore kurasika pakati pevanokwikwidza kana ukasataurira vangangotenga uye vatengi nezve zvaunopa. Iko kushambadzira kunogona kuve kwakasiyana, asi vhidhiyo Ad Ad inoonekwa seinonyanya kushanda. Inogona kukanganisa manzwiro kupfuura mamwe mafomu. Ndicho chikonzero Semalt anounza rakasiyana basa rekugadzira iyo vhidhiyo yakasarudzika. Icharatidza zvese zvakanaka zvekambani yako uye ichaunza yakawanda traffic kune yako webhusaiti. Unogona kusarudza vhidhiyo yemhando neetemplate kana kuraira sarudzo nezvaunoda. Vhidhiyo Yekusimudzira naSemalt inokwezva vatengi vakawanda uye inoita kuti bhizinesi rako ribudirire.
Kupfupisa kuongororwazve kwekambani yedu, isu tinogona kuraira kuti usafunga zvakanyanyisa pamusoro pekuenda kuti ubudirire kusimudzira webhusaiti. Mhinduro yacho isiri pachena. Isu tinoisa maaquents mune zvishoma nzira. Semalt inoita zvinopfuura kungosimudzira webhusaiti, zvinoita kuti vanhu vapfumi kuburikidza neSEO optimization. Kubudirira kwako ndiko kuzivikanwa kwedu. Bata nesu, isu takagadzirira kutora mutoro wekuwanda kwako.